Myanmar Small Businesses Development: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံ ဖေါ်ဆောင်ခြင်း (Business Model Generation)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံ ဖေါ်ဆောင်ခြင်း (Business Model Generation)
ပြီးခဲ့သော ဆောင်းပါးများတွင် အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အရေးပါသော မူဝါဒဆိုင်ရာများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခု စတင်ရာတွင် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း (Writing Business Plan)၊ ဈေးကွက်သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း (Marketing for Small Business) စသည်တို့ကိုတင်ပြခဲ့ပါသည်။ စာရေးသူ၏ ယုံကြည်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်နှင့် မန်နေဂျာများအနေဖြင့် သမရိုးကျ မိရိုးဖလာ စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစံနစ်များကို ဖက်တွယ်နေ၍ မရဘဲ၊ ခေတ်မှီ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပညာများကို လေ့လာ အသုံးချရန်လိုအပ်သည်ဆိုသည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးကွက်ကို ထိုးဖေါက်နိုင်ရေး၊ ပွင့်လင်းလာသောစီးပွားရေးစံနစ်အရ ဝင်ရောက်လာမည့် နိုင်ငံခြားကုန်စည်၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေးတို့မှာ ရွှေပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝေးဆိုသလို ဖြစ်နေပါမည်။
ဤနေရာတွင်အလျဉ်းသင့်၍ တင်ပြလိုသည့်အချက်တခုမှာ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အရေးပါမှုဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူ၏ ယခင်ဆောင်းပါးများတွင် နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အလုပ်အကိုင်ဖန်တည်းနိုင်မှုတို့တွင် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အရေးပါမှုကို တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အခြားအရေးပါသည့်အချက်မှာ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် အမြဲတမ်း လုပ်ငန်းငယ်များအဖြစ် လည်ပါတ်နေမည်မဟုတ်ပါ။ ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထိပ်တန်းနည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီးများဖြစ်သည့် ဂူးဂယ်(လ်)၊ ဖေ့(စ)ဘွတ်(က)၊ အက်ပဲ(လ်) စသည့်ကုမ္ပဏီကြီးများမှာ အသေးစားလုပ်ငန်းများအဖြစ် အစပြုခဲ့ကြပါသည်။ ဥပမာ အက်ပဲ(လ်)ကုမ္ပဏီသည် Steve Jobs, Steve Wozniak နှင့် Ronald Wayne တို့ သုံးဦးက ကားဂိုဒေါင်တခုထဲတွင် အစပြုခဲ့သည့် လုပ်ငန်းလေးမှ ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း တခုကို အောင်မြင်တည်တန့်သည့် ကမ္ဘာကျာ်ကုမ္ပဏီကြီးတခုအဖြစ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းရာတွင် ခေတ်မှီ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပညာများ၏ အခန်းကဏ္ဍက အလွန်အရေးပါပါသည်။
ယခုဆောင်းပါးမှစ၍ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တခု စတင်ရာတွင် အရေးပါသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုအတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံ ဖန်တည်းခြင်း (Business Model Generation) ကို အခန်းဆက်တင်ပြသွားပါမည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုအတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံ ဖန်တည်းခြင်း (Business Model Generation)သည် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများရှိ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များလောကတွင် အလွန်ရေပန်းစားနေသည့် ခေါင်းစဉ် တခုဖြစ်ပြီး မူရင်းစာရေးသူများ စီစဉ်သည့်ဆွေးနွေးပွဲများကို ဒေါ်လာထောင်ချီပေးပြီး တက်ရောက်ကြပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် လေးလခန့်က စင်္ကာပူတွင် ကျဉ်းပခဲ့သည့် နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ရန်အတွက် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ခန့်ပေးရသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခု အောင်မြင်တည်တန့်နိုင်ရေးအတွက် အဆိုပါလုပ်ငန်းမှထုတ်လုပ်လိုက်သည့် ကုန်စည် (သို့မဟုတ်)ဝန်ဆောင်မှုက စားသုံးသူနှင့် လုပ်ငန်းရှင်အတွက် တန်ဘိုးဖန်တည်းပေးနိုင်ရန် (value creation) လိုအပ်ပါသည်။ စားသုံးသူအတွက် တန်ဘိုးဖန်တည်းခြင်းဆိုသည်မှာ ကုန်ပစ္စည်းကို စားသုံးခြင်းမှ ရရှိလာသည့် အကျိုးကျေးဇူး (စိတ်ကျေနပ်မှု၊ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မှု)က ၎င်းကုန်စည် အတွက်ပေးရသည့် ဈေးနှုံးထက်ပိုများသည်ဟု ခံယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် စားသုံးသူ၏ အမြင်တွင် ပစ္စည်းက ပေးရသည့်ဈေးနှင့်စာလျှင်တန်သည်ဟု ယုံကြည်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်အတွက် တန်ဘိုးဖန်တည်းခြင်းဆိုသည်မှာ ကုန်ပစ္စည်း၏ဈေးနှုံးက ၎င်းကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ကုန်ကျသည့် စားရိတ်ထက် ပိုများခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်အတွက် တန်ဘိုးမှာ လုပ်ငန်းမှရရှိလာသည့် အမြတ်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ မြင်သာရန်အတွက် ဤတန်ဘိုးဖန်တည်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို အောက်ဖေါ်ပြပါ ညီမျှခြင်းများဖြင့်ဖေါ်ပြနိုင်ပါသည်။
စားသုံးသူအတွက်တန်ဘိုး = အကျိုးကျေးဇူး (Benefits) - ဈေးနှုံး (Price)
လုပ်ငန်းရှင်အတွက်တန်ဘိုး = ဈေးနှုံး (Price) - ထုတ်လုပ်မှုစားရိတ် (Costs)
အထက်ပါ ညီမျှခြင်း (၂) ခုအနက် တခုခုတွင် အနှုတ်လက္ခဏာပြနေပါက၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတရပ် အနေဖြင့် ရေရှည်တည်တန့်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ဈေးနှုံးက ကုန်စည်မှရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးထက် ပိုများပါက မည်သူမျှ ၎င်းကုန်ပစ္စည်းကို ဝယ်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ အခြားတဖက်တွင်လည်း ထုတ်လုပ်မှုစားရိတ်က ပစ္စည်းဈေးနှုံးထက်ပိုပါက လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုအတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံ (Business Model) ဆိုသည်မှာ အဖွဲ့အစည်းတရပ်အနေဖြင့် စားသုံးသူနှင့် လုပ်ငန်းရှင်အတွက် တန်ဘိုး (value)ကို မည်ကဲ့သို့ ဖန်တည်းမည်၊ ဖန်တည်းလိုက်သည့် တန်ဘိုးကို မည်ကဲ့သို့ ရေရှည်တည်တန့်အောင်ထိမ်းသိမ်းမည်ကို ဖေါ်ပြသော ပုံစံဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် တခုရှင်းပြလိုသည်မှာ ယခုတင်ပြမည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုအတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံ ဖန်တည်းခြင်း (Business Model Generation)သည် ကုန်ပစ္စည်းအသစ် (သို့) ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များကို မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်တွင် စတင်မိတ်ဆက်မည့် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် အဓိကရည်ရွယ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ပြောင်းလဲပွင့်လင်းလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေများနှင့်အညီ မိမိတို့လုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင် လိုသည့်၊ ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှတဆင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးကွက်ကို ထိုးဖေါက်လိုသည့် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဤခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် နည်းဗျူဟာအချို့မှာ လက်ရှိထုတ်လုပ်နေသည့် ကုန်စည်ကို ဈေးကွက်အသစ်တွင် ဖြန့်ချီလိုသူများ၊ မိမိ၏ လက်ရှိလုပ်ငန်း အခြေအနေကို စံနစ်တကျ ပြန်လည်သုံးသပ်လိုသူများ အတွက်လည်း အသုံးဝင်နိုင်ပါသည်။
ယခုတင်ပြမည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုအတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံဖန်တည်းခြင်း (Business Model Generation) သည် Alexander Osterwalder & Yives Pigneur တို့ရေးသားပြုစုသည့်စာအုပ်ပေါ်တွင် အခြေခံပြီး ပြန်ဆိုတည်းဖြတ်ထားပါသည်။ အချို့အချက်အလက်နှင့် နည်းဗျူဟာများ (ဥပမာ၊ cloud coputing, real time pricing, freemium pricing, crowdsourcing) မှာ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေအရ မကိုက်ညီသေးသော်လည်း မကြာမှီကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသုံးပြုလာနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ဤစာအုပ်၏ အဓိကအနှစ်သာရမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခု စတင်မည့် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မိမိတည်ထောင်မည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ ပုံစံကို မည်ကဲ့သို့ ကြိုတင်ကြံဆရမည်ဆိုသည့် အချက်ကို အဆင့် (၉) ဆင့်ဖြင့် ရှင်းလင်းစွာ တင်ပြထားပါသည်။ ဤစာအုပ်ပါ နည်းစံနစ်များကို ကမ္ဘာကျော် ကုမ္ပဏီကြီးများဖြစ်သည့် အိုင်ဘီအမ်(မ)၊ အဲရစ်ဆင်၊ ဒီလွိုက်(တ)၊ စသည်တို့နှင့် ကနေဒါ အစိုးရ ပြည်သူ့ရေးရာ ဝန်ဆောင်မှုဌာနများတွင်လက်ရှိ အောင်မြင်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တခုကို ပုံဖေါ်ရာတွင် အရေးပါသည့် အခြေခံအုတ်မြစ် (၉)ဆင့်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁။ မိမိထုတ်လုပ်မည့် ကုန်စည် (သို့) ဝန်ဆောင်မှုကို ဝယ်ယူမည့်စားသုံးသူအလွှာ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တရပ်အနေဖြင့် မိမိထုတ်လုပ်မည့် ကုန်ပစ္စည်းကို မည့်သည့်စားသုံးသူအလွှာ (ဝင်ငွေအပိုင်းအခြား၊ အသက်၊ အလုပ်အကိုင်)ကို ဦးတည်ပစ်မှတ်ထားမည်ဆိုသည့် အချက်ကို ဦးစွာဆုံးဖြတ်ရပါမည်။
၂။ မိမိဦးတည်သည့် စားသုံးသူအလွာအတွက် တန်ဘိုးဖန်တည်းပေးခြင်း
ဒုတိယ အခြေခံအချက်အနေဖြင့် မိမိထုတ်လုပ်လိုက်သည့် ကုန်ပစ္စည်းက ဦးတည်ထားသော စားသုံးသူအလွှာအတွက် မည်ကဲ့သို့ တန်ဘိုးဖန်တည်းပေးမည်ကို စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။ စားသုံးသူများအတွက် တန်ဘိုးဖန်တည်းခြင်းဆိုသည်မှာ စားသုံးသူကြုံတွေ့နေရသည့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးခြင်း (ဥပမာ ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်(စ)ဖယ်ရှားပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှု) သို့မဟုတ် စားသုံးသူ၏ လိုအင်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း (ဥပမာ၊ ကွန်ပျုတာအရောင်းဆိုင်) တို့ကို ဆိုလိုပါသည်။ ထိုသို့ တန်ဘိုးဖန်တည်းရာတွင် တိုင်းတာ၍ရသောတန်ဘိုး (ဈေးနှုံးချိုသာခြင်း၊ မြန်ဆန်ခြင်း) သို့မဟုတ် အရည်အသွေးတန်ဘိုး (ပစ္စည်းဒီဇိုင်း၊ စားသုံးသူစိတ်ကျေနပ်မှု)ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပါသည်။
၃။ ဈေးကွက်တင်မည့် နည်းလမ်းရှာဖွေခြင်း
တတိယ အခြေခံအုတ်မြစ်မှာ ဖန်တည်းလိုက်သည့် တန်ဘိုးကို ဦးတည်ထားသည့် စားသုံးသူအလွှာသို့ မည်ကဲ့သို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဆိုသည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် မိမိ ကုန်ပစ္စည်းကို ဦးတည်ထားသော စားသုံးသူအလွှာသိရှိအောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ မိမိကုန်ပစ္စည်းက ဖန်တည်းပေးမည့် တန်ဘိုးကို စားသုံးသူက သဘောပေါက်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းကို အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်အောင် ဖန်တည်းပေးခြင်း၊ ရောင်းချပြီးနောက် လိုအပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း စသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။
၄။ စားသုံးသူနှင့် ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်မည့် ပုံစံ
မိမိပစ္စည်းကို ဈေးကွက်တင်ပြီးနောက် စားသုံးသူနှင့် မည်ကဲ့သို့ ရေရှည်ဆက်ဆံမည်ကို အချက်ကို ဖေါ်ထုတ်ရပါမည်။ ဤနေရာတွင် ဖေါက်သည်ရှာခြင်း၊ ရေရှည်စားသုံးသူဖြစ်အောင်ဆွဲဆောင်ခြင်း၊ အရေအတွက်များများဝယ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။
၅။ ဝင်ငွေ လမ်းကြောင်း သတ်မှတ်ခြင်း
ပဉ္စမအဆင့်အနေဖြင့် မိမိပစ္စည်းကို စားသုံးသူက ငွေကြေးအားဖြင့် မည်ကဲ့သို့တန်ဘိုးဖြတ်သည် ကို သိရှိအောင် ပြုလုပ်ရပါမည်။ သတိပြုရမည့်အချက်မှာ စားသုံးသူက ကုန်ပစ္စည်းတခုကို စားသုံးခြင်းမှ ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးပေါ်တွင် မူတည်၍ တန်ဘိုးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတန်ဘိုးမှာ ပစ္စည်းဈေးနှုံးထက် ပိုများနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် မိမိကုန်ပစ္စည်းကို တခါတည်းဈေးသင့်၍ အပြတ်ရောင်းချမည်၊ သို့မဟုတ် စားသုံးသူအသုံးပြုသလောက် လစဉ်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေး စသည်ဖြင့် ကောက်ခံ၍ ရေရှည်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတခု ဖန်တည်းမည်၊ စသည်တို့ကို စဉ်းစား ကြံဆရပါမည်။
၆။ အရေးပါသည့် သွင်းအားစုများ
အထက်ဖေါ်ပြပါ အဆင့် (၅)ဆင့်ကို ဖေါ်ဆောင်ပြီးနောက် ၎င်းအဆင့်များအတွက် လိုအပ်မည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၊ နည်းပညာ၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စသည့် အရေးပါသည့် သွင်းအားစုများကို သတ်မှတ်ရပါမည်။
၇။ အဓိက လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များသတ်မှတ်ခြင်း
သတ္တမ အဆင့်အနေဖြင့် စားသုံးသူအတွက် တန်ဘိုးဖန်တည်းခြင်း၊ ပစ္စည်းကိုဈေးကွက်တင်ခြင်း၊စားသုံးသူနှင့် ရေရှည်ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဝင်ငွေရရှိအောင် ဖန်တည်းခြင်းတို့ကို ဖေါ်ဆောင်ရာတွင် အဓိက လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များကို ဖေါ်ထုတ်ရပါမည်။
မိမိ ထုတ်လုပ်မည့် ကုန်ပစ္စည်းအတွက် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းပေးသွင်းမည့်သူများ၊ လိုအပ်သည့် နည်းပညာကို ပိုင်ဆိုင်သူများ၊ ကုန်ပစ္စည်းကို ဈေးကွက်တင်ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရေးပါသည့် သွင်းအားစုများကို ထောက်ပန့်နိုင်သူများသည် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရမည့်သူများဖြစ်ပါသည်။
၉။ ကုန်ကျစားရိတ် သတ်မှတ်ခြင်း
နောက်ဆုံးအဆင့်အနေဖြင့် အထက်ပါ အဆင့်(၉)ဆင့်ကို အခြေခံပြီး မိမိထူထောင်မည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို လည်ပါတ်ရန် ကုန်ကျမည့် စားရိတ်များကို သတ်မှတ်ရပါမည်။
နောက်ဆောင်းပါးများတွင် အထက်ပါ အဆင့်(၉)ဆင့်ကို တဆင့်ခြင်း အသေးစိတ် တင်ပြသွားပါမည်။ မူရင်းစာအုပ်ကို လေ့လာဖတ်ရှုလိုသူများအနေဖြင့် www.amazon.com တွင်မှာယူနိုင်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်စားနေသည့် အင်တာနက်တက္ကသိုလ်များတွင် တခုအပါအဝင်ဖြစ်သည့် Udacity (www.udacity.com) တွင်လည်း မူရင်းစာအုပ်ပေါ်တွင် အခြေခံထားသည့် How to BulidaStart-up သင်တန်းကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် အခမဲ့တက်ရောက် သင်ယူနိုင်ပါသည်။
Osterwalder, Alexander. (2010) Business Model Generation, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံ ဖေါ်ဆောင်ခြင်း by မြင့်မိုးချစ် is licensed underaCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Posted by Myint Moe Chit at 1/12/2013 08:56:00 pm
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံ ဖေါ်ဆောင်ခြင်း (Business M...